Home » Aha! Jokes, Satire » ထိုင်းကိုနိုင်ဖို့ အူးခြစို့ U23
ခွစ်ယံဘောသမားတွေ ယင်ဗတ်ခရော့ စ်လှုပ်တာနဲ့ မတူဗူးဂျ။ ခုဟာက ကိလေသာ ထူဒဲ့ ပိတ်သပ်ကျီးကို အူးခြဒါ။ သိပ်ကန်ဒေါ့ဂျင် ဘုရားဆင်းတု ပင့်ထား အူးခြပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် မဘသ ကိုယ်တော်တပါးပါး ကွင်းထဲပင့်ထား..။
လူတွေ အငုံ့ဆိတ် အသွပ်သွင်းခံနေရတာပဲ ယဉ်ကျေးမှုလိုလို…။ ထောက်ပြတဲ့အခါ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ တံဆိပ်ခပ်.. လူတွေ လွပ်လပ်သွားမှာ၊ သခင်ဆိတ် ဝင်မှာ သိပ်ကြောက်..။
မြန်မာတွေလူညွှန့်ချိုးခံထားရသမို့.. ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့.. ကမ္ဘာမှာနာလံထူဖို့ရယ်.. သိပ်မမြင်..။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်အသင်းက ကိုယ့်ထက် ပိုကောင်းတဲ့အသင်းကိုနိုင်တယ်..
နိုင်ထားသမို့.. HR ပါဝါကသိပ်ကြီးနေချိန်.. သူတို့လုပ်တာ.. အဲဒါကနေ..ရိုးရာ.. ။
ဘာဖြစ်တုန်းဗျ…. အလုပ်ပျက်အကိုင်ပျက်ခံပြီး လာအားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ဦးချတာ….
ကိုင်း သူကြီး ရာ
အနှော်ကဒေါ့ အပြာရောင် လွှမ်းဆေဂျင်ဒယ်….
အခု “ကျွန်မ” ကိုယ် “ကျွန်မ” “ကျွန်မ” လို့ သုံး တယ်။
ဒီ အလောင်း အစား က အကောင် အထည် မပေါ်နိုင် မဲ့ အလောင်းအစား ဆိုတော့ ကြည့်မကောင်းဘူး
လက်၁၀ချောင်းနဲ့.. ၁ခါ.. ၂ခါ… ၃ခါ.. ၄ခါ… ၅ခါ…
ဟို ပုံပြင်လို ဖစ်နေမယ်…
ခု က စိမ်းး ဝါ ပေါင်းးပီးးး
ကိုယ်ရဲ့အချိန်တွေ ငွေတွေသုံးပြီး အားတက်သရော လာအားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို တစ်ယောက်ချင်းစီ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မနှုတ်ဆက်နိုင်လို့ ဦးချတာ အားကစားသမားတွေအနေနဲ့ သူတို့တာဝန်ကျေအောင်လုပ်တာမို့ မှန်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
မလတ်ရဲ့ အလောင်းအစားမှာ မလတ် ဘက်က တစ်မဲပါပါတယ်။
အာ့ ဆို လည်းး အူးးမချဂျနဲ့… ..!!
မြန်မာနိုင်ပီးရော ဘရာကြိုးမရှိချင်နေ ငှားထားတဲ့ ၂ ကြိုးပြန်ယူ…
ဒါနဲ့ ကကြောင်က အူးချတာ မကြိုက်ဖူးဆိုတော့ ကင်မရာဘက်လှည့်ပီး ငေါ့ပြစေချင်တာလား… မှားလို့ ခေါင်းမော့ပြတာပေါပါဒယ်..
ငါ မေးးမို့ အေ့.!
ဘာသာရေးမှိုင်းမိတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောရင်တော့ ဟုတ်မလိုလိုပေါ့ဗျာ။ ဒါမဲ့ ကျေးဇူးရှိလို့ (တနည်း) ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးစာရင်းထဲ ၀င်သွားတဲ့သူမို့ ဦးချတာ (ကျွန်တော်ကတော့ ကန်တော့တယ်လို့ကိုပြောချင်တာ) အပြစ်မဆိုသာပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ၁၂ယောက်မြောက်ကစားသမား ဆိုပြီး ပရိသတ်ကိုပြောနေမှတော့ သူတို့ အားကြောင့် ကျေဇူးကြောင့်ဆိုတာ သိသာပြီးသားပါ။
.နေရာတကာ ဘာသာရေးကိုအားကိုးတာတော့ အကျင့်မဖြစ်စေချင်တာအမှန်…
ဆိုတော့… အဲ့ပွဲတွေမှာ မြန်မာတွေ တစ်ယောက်မှ သွားမကြည့်ရင်… တစ်ကွင်းလုံး မြန်မာတစ်ယောက်မှ ရှိမနေရင်.. ဒီလိုပဲ နိုင်ဦးမယ်လို့ ယုံကြည်လား အူးကြောင် …
နိုင်ငံခြားရောက်ပီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗမာလူမျိုးဆိုတာမေ့ ကိုယ်ကမြင့်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံကလူတွေကိုနှိမ့်ချ အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်နဲ့ စော်ကားချင်တိုင်းစော်ကားနေတာ နောင်ကို ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် ငါမြန်မာဆိုတာမပြောမိစေနဲ့။ ရှက်လွန်းလို့။ မြန်မာပြည်အတွက်ဆိုပြီးနောင်ကိုခေါင်းစဉ်တပ်ပြီးဘာအလှုမှမလုပ်ပါနဲ့။ ဘယ်တော့မှပါဝင်မှာမဟုတ်ဖူး လှုခဲ့မိတဲ့အလှုအတွက်လဲ နောင်တရမိပါရဲ့။ ဒီဆိုက်ရဲ့မန်ဘာအဖြစ်ဂုဏ်ယူခဲ့မိတာလဲနောင်တရမိပါရဲ့။ သဂျီးကိုကော ဦးကြောင်ကိုကော နှစ်ယောက်လုံးကိုပြောတယ်မှတ်ပါ
ဒီမှာ မဲသွပ်… ကောင်းစေခြင်လို့ အမြင့်ပေးတင်ဒါ ဖေးအင်တယ်စိုပီး ခုံမချခြင်ဆမ်းပါနဲ့…။ သောက်၃မကျလို့ မကျဗူး ဝေဖန်တာ မကြိုက်ရင် အလိုကျပြောပေးမဲ…။ ဒေါ်မဲသွပ်ကြီး ပြောသလို ငှဆဂါး နွားယ ဖြစ်ပါသီခမြှာ…။ ကဲ ကဲ.. မုန်းလို့ မလှူ … မလှူ လို့ မြန်တျန့် မဖစ်ရလေအောင် ဒေါ်မဲသွပ်ကျီး တဖက်ပိတ် လန်းစင်သာ ကောင်းပါသီ အယက်ဂဒို့..
အဲ့ တို့ချစ်ညီမ ပွဲကြမ်းနေပါရော့လား။
တကယ်ကို ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီး နေရာစရာ မရှိရှာ တဲ့ အဘိုးအဘွား တွေ ကို လှူတာဘဲ။
ဒင်းတို့လဲ သူတို့ ပြောချင်သလို ပြောပါစေ။
အသာနေဆမ်းပါဗျာ…. ဟေ့ မဲသွပ်ကျီး.. ပျံမလာနဲ့.. နိဂို ရွာကို မလိုခြင်ဒေါ့ဖူး… သွား သွား ခု ထွက်သွား…
ညွသဲရေ ဒီရွာမှာ ဘယ်သူမှကြောက်စရာမလိုဘူး။
လိုအပ်ရင် ၀န်းရံပေးမယ့် ညီအမတွေ ချွေးမတွေရှိတယ် မမေ့နဲ့လေ။
ပြည်တွင်းနေမြန်မာတွေကိုနှိမ်လွန်းလို့ပါအရီးနဲ့မမရယ်။ သိပ်များနေဘီ။ သီးခံနေတာအတော်များဘီ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားနေကြတာ ကြောင်ကသူ့ကိုသူဘာအောက်မေ့နေလဲမသိပါဘူး။ ကြောင်နှင်လို့မထွက်တော့ဘူး အရီးနဲ့မမရေ။ မဟုတ်ရင်ဂုဏ်ဖော်နေအုံးမယ်။
ပြာသိုကာလ ကြောင်က ထ။
ကျုပ်ကိုလည်း ကေအိုင်အေသူပုန်လို့ပြောလိုပြော ယောက္ခမခေါ်လိုခေါ်နဲ့
ဒါမှ တို့ မွသဲ ကွ။
ဟုတ်တယ် အလဂါးကြောင် အဆံချောင်ကြောင် သင်္ကြန်အမြှောက်ကြောင်
မြန်မာတို့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာတိုးတက်မှုကြီး၁ခု.. အဲ.. ၂ခုကို.. အနိုင်ရလိုက်ကြောင်း…
ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီး ကျေနပ်တယ်။ အများကြီးမပြောတတ်ဘူး။